Somaliland Noqonmayso Dal Dastuurkiisa Sida Gabaldayaha Marba Dhinac Loo Jeediyo, Dalkuna Saddex Xisbi Uma Xidhnaanayo” - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Somaliland Noqonmayso Dal Dastuurkiisa Sida Gabaldayaha Marba Dhinac Loo Jeediyo, Dalkuna Saddex Xisbi Uma Xidhnaanayo”
Hargeysa(ANN)-Mujaahidiin iyo Odayaal la baxay Ururka Somaliland-jire, ayaa ku eedeeyay xukuumadda Madaxweyne Biixi in ay baalmartay dastuurka dalka iyo shuruucdii dalka u taalay, isla markaana Dastuurka Dalka laga dhigay sida Geedka Gabaldayaha ee marba dhinac loo jeediyo.
Kooxda Mujaahidinta iyo Odayaasha la baxay Somaliland-jire, waxay sheegeen in aannay Somaliland oo soddon sannadood dunida la raadinaysay aqoonsi sidan kusii soocon karin, waxa kale oo ay xukuumadda ku eedeeyeen in aannay ka jawaabin sheegashada kooxda muqdisho ee Villa Somalia maalin walba ku sheegato Somaliland.
“Saddexda Xisbi way ka aradan yihiin dimuqraadiyada, Kulmiyena”Prof. Ismail Hurreh Buubaa
Sidoo kale, waxay ka hadleen xeerka dhowaan Madaxweyne Biixi kusoo celiyay gollaha Wakiillada, waxayna ku tilaameen arrintaa mid sharcidaro ah, isla markaana waxay tilaamameen baahida loo qabo in la helo saaxad dimuqraadi ah iyo tartanka ururada siyaasada oo aan loo baahnayn in dalku u xidhaando saddex xsibi.
Mujaahidiinta iyo Odayaasha oo warbaahinta qaarkood kula hadlay shalay Magaaladda Hargeysa, waxay sidoo kale dhaliil dusha u saareen axsaabata mucaaradka oo ay ku tilamaameen kuwo gabay kaalintoodii.
Muuqaalka arrimahaa iyo kuwo kale ay kaga hadleen Halkan Ka Daawo AraweeloTV.